Maalinta: Sebtember 22, 2017
Düziçi Düldül Dabiiciga Dalxiiska iyo Dalxiiska Isboortiga Xilliga Jiilaalka Xarun Dhismaha Xarunta DIVICI MUNICIPAL SCIENCE Tilmaanta Khariidadda Awood-siinta (Duzici Mountain DIVID Nature & Ciyaaraha Jiilaalka) [More ...]
Wakhtiga firfircoonida ee Island Express
KESK'e United Transport Workers Union (BTS) Istanbul 1 No. Laanta, Island Express inay timaado xarunta weyn iyo duulimaadyada Adaray si ay mar kale u bilaabaan inay taageeraan Sakaryalı'a, berri ayaa shir jaraa'id ku qaban doona Adapazarı. [More ...]
Gaadiidka Gaadiidka Dawlada Hoose iyo Adeegyada Gaadiidka Dadweynaha (MOTAS) ayaa lagu sheegay warbixin ay soo saareen Sabtidii la soo dhaafay, in lagu ciyaaray garoon cusub Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor ciyaarta taageerayaasha huruudda guduudan ah. Bayaanka, ciyaarta [More ...]
Meel kale oo muhiim ah oo ku yaal tareenka miyiga
Marka la eego soosaarka khadka Konak Tramway, isku xirka howlaha u dhexeeya Cumhuriyet Boulevard iyo Gazi Boulevard ayaa la gaari doonaa dhamaadka isbuucaan. 23 Sabtida, Sebtembar iyo 24 ee Axadda, Cumhuriyet Avenue jihada Alsancak-Konak [More ...]
Shiinaha ayaa bilaabay inuu isticmaalo 'tareenka xawaaraha ugu dheereeya adduunka', kaas oo ku safraya kilomitir 350 saacaddii. Tareenadu waxay ka safri doonaan Beijing, caasimada Shiinaha, ilaa Shanghai, iyo 1.250 kiiloomitir fogaanta 4 saacadood 30 [More ...]
Gudoomiyaha gobolka Fahri Meral ayaa xafiiskiisa ku qaabilay TCDD Karaman Train Station. 21 Sebtembar 2017 Maareeyaha Tareenka Tareenka Karaan Gürsan Aydın, Maareeye Ku Xigeenka Tareenka Tareenka Kemal Ertekin [More ...]
Elazığ, darawalka ayaa ku dhaawacmay shil baabuur oo ku dhacay baabuurkii tareenka halka uu bilaysku qarxay isagoo sugaya isgoyska heerka. Marka loo eego macluumaadka la helay, '61-sano jir Seid Ali Pehlivan oo hoos yimaada maamulka gawaarida xamuulka ee 23 LF 274, Asri [More ...]
RayHaber 22.09.2017 Warbixinta Shirka
Ma jiraan diiwaanada qandaraaska ee taariikhda 22.09.2017 ee nidaamkayaga.
IETT: Xadgudubyada aan ku ridno Metrobuses
IETT waxay sameysay bayaan xiiso leh oo ku saabsan axaadiista lagu dhejiyay maaddada metrobus. Sarkaal ka tirsan IETT oo ka jawaabaya su'aalaha BirGün ee mowduuca ayaa sheegay in tan kaliya ay codsadeen hal rakaab ah iyo xadiiska [More ...]
Metrobus Skein oo reer Istanbulites ah
Magaaladan Metrobuses ayaa kamid ah kuwa culays ku ah taraafikada caanka ah ee Istanbul. Si kastaba ha noqotee, way adag tahay in la sameeyo safar raaxo leh ee metroobuse. Sababta oo ah baahida ayaa weyn. Dhamaadka xagaaga iyo furitaanka iskuulada, cufnaanta ayaa korodhay. Yaan loo dul fadhiisin taraafigga, [More ...]
Koçbay ayaa tijaabinaysa mashruuca marinada magaalada ee Akhisar
TCDD Izmir 3. Maareeyaha gobolka Selim Koçbay ayaa baaray mashruuca kala guurka magaalada ee horumarka ka socda Akhisar. TCDD Izmir 3. Maareeyaha Gobolka Selim Koçbay, Maareeyaha Adeegga Dayactirka Waddada Waddada M. Soner Baş, [More ...]
Ogeysiiska Qandaraaska: Degiçi Düldül Dhismo Dhaqdhaqaaqa Cimilada iyo Cimilada Cimilada Xarunta Dalxiiska Dhismaha Dhismaha